05-06-2010 05:50 AM #11
Junior Cupid MCFC 99
Thanked 2,246 Times in 254 Posts
usaemf District7udk roGm;jzpfbJ American eJU ppfjzpfcJUwJU aysmufusm;ppfwdkufwJUae&mjzpfwJU Chu Chi VC Tunnel udk oGm;cJUygw,f . . . "mwfyHkeJeJ&dkufcJUw,f . . . wifay;Edkifr,fhvl&Sd&if tD;ar;ydkUay;yg&ap . . yHkawGtxJa&muf&ifawmU wdk;*dkufajymwmav;awGudk jyefa&;ay;ygr,fh . . .
abya, BamarBlood, complicatedcool, Ko Khant, kothuthu, mamasnow, PiNyat
05-06-2010 01:39 PM #12
udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel udk oGm;&mwGif &dkuful;cJhwJh rSwfwrf;wif"gwfyHkrsm;yg cifAsm...
udk ChitMinLay udk,fpm; ulnD wifay;wmygcifAs/
Last edited by PiNyat; 05-06-2010 at 02:04 PM.
abya, BamarBlood, ChitMinLay, complicatedcool, KaungKinPyar, kothuthu, mamasnow, nakamura
05-06-2010 02:03 PM #13
udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; tqufyg cifAs...
Last edited by PiNyat; 05-06-2010 at 03:24 PM. Reason: adjust
abya, BamarBlood, ChitMinLay, KaungKinPyar, kothuthu, mamasnow, nakamura
05-06-2010 02:32 PM #14
abya, ChitMinLay, complicatedcool, kothuthu, mamasnow, nakamura
05-06-2010 03:20 PM #15
udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; wifí NyD;ygNyD cifAsm/ udk ChitMinLay rS qufvufNyD; &Sif;vif; ajymjyay;ygvdrfhr,f cifAsm...
abya, aprilboy, ChitMinLay, complicatedcool, mamasnow, nakamura
05-07-2010 04:37 AM #16
Chu Chi VC Tunnel
Firstly, many many Thanks to PiNyat
AD,uferftaMumif; ed'gef;uawmh udka';vdkufMuD; wifay;xm;wmawmfawmfav;pHkaevdkU . . trsm;MuD;awmUra&;awmUygbl; . . .
AD,uferf u vmtdk ? w&kwf? urfabm'D;,m;wdkU eJU e,fedrdwfcsif; xdaeygw,f . . NyD;awmUvnf; AD,uferf&JU tOD;qHk;eJU t&ifqHk;t"duusL;ausmfppfqifEGJcJUwJU EdkifiHuawmU trsm;xifovdk jyifopfeJU tar&duefwdkUr[kwfbJ w&kwfawGbJjzpfygw,f . . . at'Dtapmydkif;umvuwnf;u w&kwfwdkU [m AD,uferfudk tMudrfMudrfvma&mufNyD; usL;ausmfppf qifEGJygw,f . . odrf;NyD;&ifvnf; udkvdkeDvkyftkyfcsKyfygw,f . . wcgvmwdkif; AD,uferfawG[m w&kwfwdkUudk jyefvnf wdkufxkwfNyD; vGwfvyfa&;,lcJUygw,f . . w&kwfawGuvnf; ESpfaygif;w&m0ef;usifqdk wcgjyefvnfusL;ausmfavh&Sdw,fvdkU od&ygw,f. . . w&kwfawGqDu tjyD;wdkifcGJxGufEdkifcJUwmawmU at'D 930ausmf0ef;usifrSmjzpfygw,f . . .
aemufydkif; 19 &mpkv,f rSmawmU at;csrf;om,maewJU AD,uferfawG[m jyifopfwdkU&JU usL;ausmfrIeJUtwl udkvdkeDvufatmufcHb0udk wzefusa&mufcJUjyefygw,f . . . jyifopfawG[m wdkif;jynfwckvHk;udk ESpfaygif;w&meD;ygtxd tkyfcsKyfcJUygw,f . . .
jyifopfwdkUAD,uferfudk tkyfcsKyfwJU taESmif;ydkif;umvrSmawmU [dkcsDrif[m ajrmufydkif; rSm uGefjrLepfpepfudk pwiftaumiftxnfaz:ygw,f . . . 'DawmU uGefjrLepfpepfu AD,uferfudk tajcjyKNyD; ta&SUawmiftm&S udk jyefUESHUrSmudk pdk;&drfwJU tar&duefwdkU[m AD,uferfawmifydkif;udk 0ifa&mufcJUygw,f . . . AD,uferfudka&mufNyD;NyD;csif;rSmbJ tar&duefwdkU vkyfwmuawmU wdkif;jynf&JU tv,fydkif;udk AHk;usJcJUygw,f . . . urfrDu,f"mwfaiGU&nf vDwmaygif; ESpfoef;cefUusJcJhw,fvdkU od&ygw,f . . . &nf&G,fcsufu awmU uGefjrLepfMuD;pdk;pjyKvmwJU ajrmufydkif;eJU olwdkU ajcukyf,lr,fUawmifydkif;udk ydkif;jcm;vdkufwmbJjzpfygw,f . . . 'DawmUrS awmifydkif;eJU ajrmufydkif;wkdU[m tpdk;&ESpfckuGJoGm;ovdk tkyfcsKyfyHkcsif;uGJoGm;NyD; pepfawG[mvnf; rsOf;jydKifESpfaMumif;vdk jzpfcJU&w,f . .. jynfwGif;ppfMuD;vnf;pwifcJUygw,f . . . tar&duefawGu olwdkUwifxm;wJU awmifydkif;orfrw 'if; udk tar&duefppfom;awG oGif;zdkU nSdEdkif;&mrSm vufrcHcJUygbl; . . . 'if;u aiGeJU vufeufeJUbJawmif;qdkcJUw,f . . . olUzmomoljynfwGif;wdkufcdkufa&;udk pD&ifzdkUjzpfygw,f . . . 'DvdkvufrcHcJUwJU 'if;[m 1950 rSm vkyfMuHcHcJU&ygw,f . . . 1953 rSm tar&duefwyfawG AD,uferfudk 0ifa&mufvmcJUygw,f . . .
awmifydkif;rSm [kdcsDrif&JU uGefjrLepfpepfudk axmufcHwJU olawGvnf;&Sdygw,f . . olwdkUuawmU tar&duefudk qefUusifykefuefNyD; tar&duef awGudk wdkif;jynfuae wdkufxkwfr,fh olawGygbJ . . .
tar&duefwyfom;awG0ifvmtjyD;rSm tar&duefeJU awmifydkif; tar&duefqefUusifolwdkU[m ppfyGJaygif;rsm;pGm;udk qifEGJcJUMuygw,f . . .
'D Chu Chi VC Tunnel taMumif;uawmU AD,uferfawmifydkif;rSm tar&duefwdkU tkyfcsKyfaewJUtcsdef [dkcsDrif&JU uGefjrLepfpepfudk axmufcHwJU Chu Chi &Gmav;&JU tar&duefudk ckcHumuG,fwdkufxkwfcJUyHkawGudk tenf;usOf; odoavmufajymjyoGm;rSmyg . . . (wcsdKUawGvnf; rSefcsifrS rSefr,fxifw,f . . . yHkjyifvkyfNyD;omem;awmifawmU . . . A[kokwaygU . . . jyoemawmU &Sdavmufygbl;aemU . . . [D
abya, complicatedcool, gigabyte, mamasnow, nakamura
01-14-2011 10:27 AM #17
၀၆-၀၁-၂၀၁၀ ကတည်းက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့ ရောက်နေတယ်။ ၁၃ ကနေ ၁၉ C ဆိုတော့ ရာသီဥတုက အတော်အေးပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး နေမထွက်ပါ။ မြင်တာတွေကိုအလွယ်ပြောရရင် ၂၄ နာရီ မီးလာတယ်၊ စက်မှုဇုံတွေ လည်းမြင်ခဲ့ရတယ်။ ကန်နွန် ၊ ပန်နဆိုးနစ် ၊ တိုယိုတာ စက်ရုံတွေကို လေဆိပ်ကနေမြို့ထဲအဝင်လမ်းမှာ ဖျတ်ကနည်းတွေ့လိုက်တယ်။ ဆောက်လက်စအဆောက်ဦးတွေ ၊ လူနေအိမ်ရာတွေ ၊ ဟိုတယ်တွေ တွေ့တယ်။
ဟိုတယ်မှာတင် ဗီယက်နမ်ဒေါင် လှဲလိုက်တယ်။ 1 USD = ၂၀၀၀၀ VND ။ ဟိုတယ် Bellboy ကိုတစ်မန်းနီး $2 ပေးတော့ ဗီယက်နမ်ဒေါင်ဘဲပေးပါတဲ့။ နံနက်ခင်းမြင်ကွင်း၊ ရာသီဥတု နဲ့ ဟနွိုင်း မြို့သူ/သားတွေ မြင်ရတာ တောင်ကြီးမြို့ကို သတိရတယ်။ မြို့ထဲလမ်းတွေမှာ ဆိုင်ကယ်တွေမြင်တော့ မန်းလေးကို သတိရတယ်။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိပါ။ ဟနွိုင်း မြို့သူ/သားတွေ အသားရေလှတယ်၊ ဖြူတယ်၊ လူကောင်သေးတယ် ၊ အဝလွန်နေတာမျိုးသိပ်မတွေ့ရပါ။
ရှေ့ကလူတွေလည်းရေးပြီးနေပါပြီ ။ လိုရမယ်ရ ထပ်ရေးမယ်
ပုံမှန် အလည်/အလုပ် အတွက် တရားဝင်သွား ဆိုရင် ဗီယက်နမ် ၊ ဟနွိုင်း Ỉmmegration မှာ အဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိပါ။
လေဆိပ်ကနေ တက်စီငှားရတာ ရွမှာလို ခေါင်းမကိုက်ပါ။ ပတ်မောင်းပြီးလိမ်တောင်းတာမျိုး စီးဖူးသမျှ မကြုံရပါ။ တက်စီ ကန်ပနီအလိုက် ဈေးနှုန်းမတူပေမယ့် ပျမ်းမျှ 1KM= 1000 VND ပါ။ တက်စီကားမောင်းသူ အများစုက Eလိုမပြောနိုင်ပေမယ့် လိပ်စာပြမောင်းခိုင်းရင်အဆင်ပြေပါတယ်။
နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ wi fi ရတယ်။ Prepaid Card phone ဝယ်ရတာသိပ်မလွယ်ပါ။ စတိုးဆိုင်မှာမေးတော့ မရှိဘူးလို့ဖြေတယ်။ သာမန် အရောင်းဝန်ထမ်းအများစုက Eလိုမပြောနိုင်ပါ။ VinaPhone ရုံးခွဲမှာဝယ်တော့ ( SIM card =+ top up card) အတွက် 160 K ပေးလိုက်ရတယ်။ တန်ပါတယ်။ သုံးနေကျ စလုံးက Prepaid Card phone ကလည်း International Roaming ရပါတယ်။
ဟိုတယ်တွေ ကြီး/ငယ် ပေါတယ်။ ချုံပြီးပြောရင် USD 35- 200 ကြားရှိတယ်။ Grand Plaza Hotel မှာတော့ ၂၀၀ ပေးရတယ်။ သာမန် ဟိုတယ်အသေးလေးတွေကလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အပြင်ဆင်ကောင်းပါတယ်၊ USD 35 ကနံနက်စာပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် သာမန် ဟိုတယ်အသေးလေးတွေက ဝန်ထမ်းအများစုက Eလိုမပြောနိုင်ပါ။
နံနက်စာစားရတာသိပ်အဆင်မပြေပါ။ ဟိုတယ်ကkကျွေးတဲ့ ပေါင်မုန့် ကြက်ဥ Coffee ကိုညီးငွေ့ လို့အပြင်ထွက်စားလည်းပြေမယ်မထင်ပါ။ အမဲသားပြားလွှာ ဆန်ခေါက်ဆွဲ ဟာသူတို့ ရိုးရာနံနက်စားဖြစ်ပြီး ဒို့ဆီက မုန့်ဟင်းခါးလိုဘဲနေရာတကာမှာရောင်းတယ်။ တစ်ပွဲ 15000-20000 VNDရှိတယ်။ 16000-20000 VND ပေးရတဲ့ ဗ ရိုးရာ Coffeeက အရသာပြင်းပြင်း သောက်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါမယ်။ နေ့လည်စာ ညစာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အသားတစ်မျိုး + ဟင်းရွှက်ပြုတ် + ဆလတ်သုပ် + ဟင်းရည် + ထမင်း ပါတဲ့တစ်ပွဲကို ဆိုပေါ် မူတည်ပီး 39000-45000 VND ပေးရတယ်။ ဟိုတယ် စားသောက်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ ၃၀၀၀၀၀ အထက်ကုန်ပါတယ်။ လာချသမျှ အစားသောက် လတ်ဆတ်တယ်။ Grand Plaza Hotel ကပင်လယ်စာ ဘူဖေးက USD 15/pax ပါ။
အဝတ်စားအပါဝင် ပစ်စည်းမျိုးစုံ သက်သက်သာသာနဲ့ ညဈေးမှာဝယ်လို့ရတယ်။ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်းဂနွေ သုံးရက်သာရောင်းတယ်။ စလုံးမှာ ရောင်းတဲ့ quality လောက်ရတယ်။ ဈေးက ထက်ဝက်လောက်သက်သာတယ်။ လူတိုးရတာရယ် ပစ်စည်းကောင်းရှာရတာကလွဲပီး ကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ်။ ပွဲကြိုက်ခင်ကို ခေါ်သွားသင့်တဲ့နေရာပါ။ ငွေရှင်းတဲ့အခါ ပိုက်ဆံမှာ သုံညဘယ်နှစ်လုံးပါတယ် ဆိုတာနည်းနည်းသတိထားရမယ်။ မကြာခဏမှားတတ်တယ်။ ရန်ကုန် ပါရမီလမ်းမှာ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ Big C Supermarket ဟာ Hanoi မှာသိပ်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်။
အလုပ်အခြေနေ နှင့် အလုပ်ချိန်
8:00 - 5:00 pm ( အစိုးရ ရုံးချိန်က 4:30pm အထိသာ)
11:30 - 2:00 pm (နေ့လည်စာ နားချိန် )
ကိုရီးရားဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အပြောရ ဗ လုပ်သားတေဟာ ပျင်းတယ်တဲ့။ သူခန့်ထားတဲ့ Fresh Graduate Auto CAD drafter တစ်ယောက်ဟာ ဘာမှခိုင်းလို့မရသေးပေမယ့် USD 200 အနည်းဆုံးပေးရတယ်တဲ့။ ဒီထက်နည်းပြီးပေးမယ် ဆိုရင် အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတောင် မရှိပါတဲ့။ အများစုက တစ်ပတ် ၅ရက်ဆင်းဖြစ်ပြီး တချို့က စနေ နေ့ဝက်ပါတဲ့။ OT ခိုင်းလို့မရ။ ခဏခဏ ဆေးလိပ်သောက်ချိန်လုပ်ပြီး တစ်ခါထွက် ၃-၄ယောက်ဆိုဘဲ။ လူငယ်အများစုက သုံးနိုင်တာမြင်ရတယ်။ အိမ်ခြံမြေဈေးက ကိုရီးယား ဆိုးရ်မြို့ထက် ဈေးကြီးတယ်တဲ့။
ညရေး ညတာသွားလာရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထိုင်း ၊ မလေးရှားထက် လုံခြုံတယ်။ ပြသနာ မရှိနိုင်ပါ။
ထုံးစံအတိုင်း မ တွေက ကျားတွေ ထက်ဆက်ဆံရေး ပြေပျက်တယ်။ ကျားအများစု စကားပြောတာ မြန်မာနားနဲ့ အဆင်မပြေပါ။ အတွေ့ကြုံအရ ပြောမယ် " ပြတိုက်ပိတ်ချိန်ဟာ ရေးထားတဲ့ စာအရ ညနေ ၅နာရီဖြစ်တယ် သို့ သော် ၄နာရီစွန်းစွန်းဆိုရင်ဘဲ လူကိုခေါ်ပီး ကျွဲမောင်းသလို မောင်းထုတ်တော့တယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကျား တွေဟာ စကားပြောတဲ့အခါ ပြုံးတာမတွေ့ ၊ မာဆတ်ဆတ်နဲ့ အကြောင်းမသိရင် ရိုက်ချင်စရာ။ ကျားအများစုက ဆေးလိပ်သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ လေဆိပ် ၊ ပြတိုက် လူအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာ အပါဝင် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘဲ ဆေးလိပ်သောက်တယ်။ ဒီမှာလည်း ကိုးရီးယားယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှုကြီးတယ်။ ကိုးရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းများတယ်။ မ အများစုက ကိုးရီးယားမလေးတွေလိုဘဲ ဆံပင်၊ ဝတ်စားတယ်။ အသားဖြူပီး ရာသီဥတုအေးတော့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ကျား/မ အမျာစုက ဆိုင်ကယ်စီးတယ်။ စလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ world brand အများစုဒီမှာရှိတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ BMW, Ford ကားတွေ အများကြီးတွေ့ ပါတယ်။
ခု ဗ မှာဘဲရှိနေသေးတယ်။ တိုးအေးဂျင့် နှင့်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်းလျှောက်သွားတာမျိုးဆိုတော့ နေရာစုံ လူစုံတွေ့တယ်။ နောက်မှဘဲ အေးဆေးရေးမယ်။
နက်ဖန် ၁၅-၀၁-၂၀၁၀ နာမည်ကျော် Halong Bay သွားမယ်။ ကင်မရာကြိုးမပါလို့ ပုံတွေမတင်နိုင်ပါ။ ကီးဘုတ်လက်ကွက်က ဗ လက်ကွက်တက်တက်လာလို့ စာရိုက်ရတာအဆင်မပြေပါ။ နောက်မှ ပုံတွေတင်ပီးအသေချာရေးပါ့မယ်။ ခုရေးထားတာတွေထဲက ပိုတာ လိုတာဖြည့်နိုင်တယ်။
VND 39000 lunch
On the way to downtown from Airport
Big C Supermarket in Hanoi
ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတချို့ တင်လိုက်တယ်။
Last edited by mrlynn; 01-17-2011 at 01:57 PM. Reason: not VND 3900, it's 39000 VND
abya, aprilboy, Aryoneoo, daylight, JoeJoule, k-pooh, Ko Khant, koshwemung, mokenlay, nakamura, orjawlan, Perigee, pieces, sai naw, sunny007, talkyboy, ttaswo, ZAM
01-14-2011 11:35 AM #18
Hanoi Museum ဟာ ဗီယက်နမ် ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ သမိုင်းလေ့လာလိုသူtတေအတွက် အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးတဲ့နေရာပါ။ ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟာ ပြတိုက်ဆောက်ပြီးစအချိန်ဖြစ်ပြီး ဗိယက်နမ် နှစ် ၁၀၀၀ အထိန်းမှတ်ပွဲ ဖြစ်တာရယ်ကြောင့် ဝင်ကြေးမပေးရပါ။ ကျောက်ခေတ် ၊ BC 300 လောက်ကနေ ၂၀ ရာစုထိ ရှေးပစ်စည်းတွေ ပြတိုက်ထဲမှာပြထားပါတယ်။ မီးဖုတ်မြေထယ် ၊ ကြေး၊ သတ္တု၊ စဉ့်ထည် ၊ပန်းချီ စတဲ့ရှေးပစ်စည်းတွေအပါဝင် ရှားပါးဓာတ်ပုံtတွေပါပြထားတယ်။ ဗိယက်နမ် နှစ် ၁၀၀၀ အထိန်းမှတ် ဆိုပြီး အဖွဲ့စည်းတစ်ခုက ရက်ပိုင်းဘဲလာပြတဲ့ ရှေးပစ်စည်းတွေအထဲမှာ ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့ 2-3AD လက်ရာတွေကိုကြည့်ခွင့်ရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်လုံးဝမပေးပါ။ စာကပ်ထားတယ်၊ ပုံပြထားတယ်။ မနေနိုင်လို့ ခိုးရိုက်ရတယ်။ လုံခြုံရေး ကင်မရာတွေကနေတွေ့သွားတယ်ထင်တာဘဲ လုံခြုံရေးတစ်ယောက်က သောက်လက်စဆေးလိပ်ကိုင်ရက်နဲ့ လာတားတယ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပီးဆက်ပြီး ခိုးရိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ လက်လျှော့ သွားလားမသိ လာမပြောတော့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပုံတစ်ထောင်ကျော်ရလိုက်ပါတယ်။
2-3 AD ဒေါင်ဆောင်း ( Dong Song ) ဖားစည်။ မြန်မာပြည်က ကရင်ဖားစည်ကိုအမှတ်ရစေပါတယ်။ ကရင်ဖားစည်နဲ့ ပြုလုပ်ပုံနည်းပညာတူပြီး ဒီဇိုင်းနည်းနည်းဘဲကွဲတယ်။
abya, aprilboy, Aryoneoo, daylight, JoeJoule, k-pooh, Ko Khant, koshwemung, mokenlay, nakamura, orjawlan, Perigee, sai naw, sunny007, talkyboy, ttaswo, Ye Win Soe
01-14-2011 12:50 PM #19
အသားတစ်မျိုး + ဟင်းရွှက်ပြုတ် + ဆလတ်သုပ် + ဟင်းရည် + ထမင်း ပါတဲ့တစ်ပွဲကို ဆိုပေါ် မူတည်ပီး 3900-4500 VND ပေးရတယ်။
VND 3900 lunch
tpfudk VND 3900 vm; 39,000 vm;As
wu,f 3900 qdk&ifodyfwefwmyJ
olwkdYrSm Big-C tjyif Coop-mart awG&Sdao;w,fav ( Corporate Market vkdYawmhxifwmyJ )
b,fae&mu qdkifawGMunfYvdkufMunfYvdkufvlawGjynfYaewmygyJ ( tokH;taqmif t0wftpm;qdkif? pm;aomufqdkif bD,mqdkif aumfzDqdkif pojzifh . . )
abya, aprilboy, daylight, Ko Khant, mokenlay, mrlynn, orjawlan, sai naw, talkyboy, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-17-2011 11:30 AM #20
39000 AD,uferfa'gif cifAs? pm&dkufwmrSm;oGm;w,f [D;/ 3900 AD,uferfa'gif qdk&if ojum;vkH;4vkH;bJ&r,fAsdkh/ vrf;ab;qdkifawGrSm aps;0,fvdkh 1000-2000 trf;p&mr&SdwJhtcg a'gif1000 twGuf ojum;vkH;wpfvkH;ay;w,f/
aprilboy, daylight, hngetsoe, Ko Khant, mokenlay, orjawlan, sai naw, talkyboy, ttaswo, Ye Win Soe